४ पौष २०७५ | December 19, 2018
​राजनीति र चेतना
शम्भु श्रेष्ठ । विश्वमै सर्वोत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधानलाई प्रमुख दलका नेताहरुले घर न घाटको बनाएका छन् । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनाइएको संविधान कार्यान्वयनमा आएका जटिलताले प्रमुख दलका नेताहरु नालायक सावित हुँदैछन् । राजनीतिक परिवर्तन गर्न जान्ने तर, त्यसलाई संस्थागत गर्न नजान्ने हुँदा सात सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा धेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । हरेक दश÷दश वर्षमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ ।… विस्तृत समाचार
१९ पौष २०७३
लेख्ने नयाँ कुरा केही छैनन् । हाम्रा नेताहरुको ताल देख्दा उही भूपिले भनेझैं घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे जस्तो देखिन्छ । विगत दश वर्षदेखि हामी कहिल संविधानसभाका चुनाव त कहिले संविधानको कार्यान्वयनमै अल्झिरहेका छौं । संविधानसभाको चुनाव पनि सकियो । संविधान पनि बन्यो । तर पनि फेरि संविधान कार्यान्वयनका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच पानी बाराबारको स्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्… विस्तृत समाचार
​ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य र हेगको डर
१२ पौष २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । सोभियत संघ विघटन भइसकेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले भनेका थिए– एउटा सिगरेट सल्काउनका लागि पूरै घरमा आगो लगाउने काम गरे, केवल सत्ताका लागि । देश गृहयुद्धतिर धकेलिँदै थियो । जनता विभाजित थिए । नभन्दै आत्मनिर्णयको अधिकारका कारण सोभियत संघ १५ टुक्रामा विभाजन भयो । नेपालमा अहिले संघीयतामार्फत् यस्तै खेलहरु भइरहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको विवाद पनि अन्ततः विखन्डनकै रणनीति हो ।… विस्तृत समाचार
५ पौष २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । हाम्रा नेताहरु दूरदर्शी नभएकै कारण हतारमा निर्णय गर्ने, अनि फुर्सदमा पछुताउने गरिरहेका छन् । नेताहरु यसैगरी गैरजिम्मेवार र लबस्तरो बन्दै गए भने त्यसको फाइदा विखन्डनकारीले उठाउने छन् । संघीयताको विवाद त्यही बिखन्डनको बिऊ हो । यो समस्याको समाधान गम्भीरतापूर्वक गरिएन भने सोभियत संघकै नियति नेपालले पनि ढिलो चॉडो भोग्नु पर्ने छ । संघीयताले आम नेपालीको चाहनामा तातोपानी खन्याउने काम गरेको छ ।… विस्तृत समाचार
२८ मङ्सिर २०७३
सबैतिर असन्तुष्टि, अविश्वसनीयता र अस्थिरता छाएको छ । चाहे राजनीतिक दलका नेता हुन् । चाहे सरकारी कर्मचारी । चाहे सर्वसाधारण जनता । कोही पनि सन्तुष्ट देखि‘दैनन् । सबैको एउटै गुनासो छ, नेताहरुले देश डुबाए । नेताहरु देश हॉक्न असक्षम भए । नेताहरुकै कारण देश विखन्डनतर्फ धकेलियो । नेताहरुकै कारण जातीय द्वन्द्वको खतरा बढ्यो । नेताहरुकै कमजोरीका कारण छिमेकीले समेत हेप्न थाल्यो । जनताका यस्तो गुनासोमा… विस्तृत समाचार
​अन्त्यहीन द्वन्द्वको आरम्भ
२१ मङ्सिर २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । नेपालजस्तो सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशमा संघीयता कति सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने बहस चलेको धेरै समय भयो । यो बहसमा बुद्धिजीवीहरुले नेपालजस्तो देशमा संघीयता लागू गर्दा देश नै टुक्रन सक्नेसम्मको निष्कर्ष निकाले । तै पनि हाम्रा नेताहरुको कानमा बतास चलेन । मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाली जनता अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिदा उभिदै पनि संघीयता नेपाली जनतामाथि लादियो । संघीयता ठिक थियो कि बेठिक भन्ने… विस्तृत समाचार
प्रचण्डः उद्देश्य र गन्तव्य ?
१४ मङ्सिर २०७३
शम्भु श्रेष्ठ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको भाषण गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जति उचाले पनि प्रचण्डले त्यो उचाई थाम्न सकेका छैनन् । एउटा उद्देश्य लिएर जनयुद्ध थालेका प्रचण्ड, अर्कै गन्तव्यमा फसेपछि मुलुक यो दुर्गतिबाट गुज्रन परेको हो । सशस्त्र युद्धबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बोकेका प्रचण्ड अस्त्र छाडेर शास्त्रमा परिणत भएपछि देश विखन्डनसम्मको अवस्थामा आइपुगेको हो ।… विस्तृत समाचार
मिडिया समाज परिवर्तनको महत्वपूर्ण अंग हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारले समाजलाई दूू्रतगतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुतेसम्म समाजलाई सूचनाको भोक जागेको हुन्छ । त्यो भोक मेटिएपछि मात्रै मानिसले आफूलाई सन्तुष्ट ठान्छ । यसै प्रसंगमा हामी मिडियाकर्मीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले गरेको पत्रकारिताबाट देश, समाज र जनता कति सन्तुष्ट छन् ? त्यतातिर ध्यान पु¥याउन नसक्दा मिडियाले जति विकास गरेको… विस्तृत समाचार
राजनीति भनेको जीविकोपार्जन गर्ने पेशा होइन । यो त देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो । राजनीतिमा आएर जसले देश र जनताको सेवा गरेका छन्, तिनको नाम इतिहासमा अंकित छ । राजनीतिलाई माध्यम बनाएर जसले देश र समाज बर्बाद पारेका छन्, तिनको नाम पनि इतिहासमा कलंकित बनेको छ । इतिहासले कस्तो नया“ नेपाल बनाउने भन्ने जिम्मेवारी एमाले, माओवादी र कांग्रेसको का“धमा सुम्पिएको छ ।… विस्तृत समाचार
​बन्द नेपालमा प्रणवको स्वागत
२३ कार्तिक २०७३
शम्भु श्रेष्ठ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझै भयो भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीन दिने नेपाल भ्रमण । सायदै विश्वका कुनै देशले भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा बिदा दिने र अघोषित कफ्र्यू लगाउने परम्परा थालेको होलान् । त्यो देश पनि नेपाल नै बनेको छ । तीन दिनसम्म काठमाडौंका जनतालाई अस्तव्यस्त बनाएर गरिएको मुखर्जीको भ्रमणलाई नेपाल सरकारले अति सफल भने पनि नेपाली जनताले त्यो सफतलाको अनुभूति गर्न… विस्तृत समाचार
‹ First Newer910 11 12 13 Older Last ›